युवा राजनीति होइन, देश प्रेमी बनौं – रोल्पा समाचार
२०७८ असार १२, शनिबार १२:५७ गते
युवा राजनीति होइन, देश प्रेमी बनौं
रोल्पा समाचारदाता on २०७८ असार १२, शनिबार १२:५७ गते
गंगादेव गाउँपालिका– ६ रोल्पा ।
समय र परिस्थिति अनुसार आफुलाई परिवर्तन गर्दै चुनौतीहरुको सामना गरेर आफ्नो छुट्टै अस्थित्व बनाउने हर कोहिको इच्छा हुन्छ तर इच्छा पूरा गर्नेको लागि हामीले धेरै चुनौतीहरुको सामना सँगसँगै सफलताको लागि अधिक मेहनत गर्नुपर्छ । समयको अर्थ नबुझ्नेहरु पछाडि पर्छन् र सभ्यताबाटै लोप भएर जान्छन् अर्थात समाप्त भएर जान्छन् भने समयको महत्व बुझ्नेहरुले समाजमा वा राष्ट्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र अस्तित्व बनाउने गर्दछन् । मानव समुदायमा जीवन निर्वाहका लागी हामी सबैले केही न केही गर्नुपर्छ । हामी जे पेशा गरेर जीवन निर्वाह गर्छौ, त्यसलाई नै रोजगार भनिन्छ । धेरै युवाहरुले आफ्नो परिवारको सदस्यहरुलाई हुर्काउनकै निम्ति स्वदेश छोडेर विदेशमा संघर्ष गरि जीवन निर्वाह गरेका छन् । हर कोहीको आ–आफ्नो सपना हुन्छ । आफुले राम्रो काम गर्ने र समाजमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाई आफू अनि परिवारका सबै सदस्यहरुलाई खुसी राख्ने ती सपनाहरू कोहि कसैको पूरा हुन्छ त कोहि कसैको अधुरै पनि हुन्छ । यस्तै–यस्तै हो, हामी सबैको जीवन काहानी । त्यसैले हामी सबैले परिवर्तनको चाहाना राख्नुपर्छ सधैं सत्य तथ्यको खोजी गर्नुपर्छ, यो हामी सबैको रुचिको विषयबस्तु बन्नुपर्छ । हामी निरन्तर यस्तै–यस्तै कार्यहरू जुट्नुपर्छ निरन्तर प्रयास र हरदम कोशिश गरिरहनुपर्छ ।
त्यसैले हामी युवाहरुको सोचाई परिवर्तनशिल हुनुपर्छ । त्यही परिवर्तनशिल सोचाईले गर्दा होला, हिजोआज मेरो सोचाई र उद्वेश्यमा भने फरक हुन थालेको छ । मैले गरेका केहि कार्यहरूमा सकारात्मक प्रतिक्रियाका आउँछ भने कतिपयको विरोध पनि आएको छ । करीव पाँच ÷छ वर्ष अघिदेखि धेरै जसो बजार तिरै बस्छु र वर्षको एक महिना दशै तिहारको बिदामा घरगाउँमा आउँछु तर बिडम्बना कोरोना महामारीले गर्दा यो वर्ष यो समयमा म घरगाउँमै छु । घरगाउँमै भएर होला गाउँघरमा भएका गतिविधिहरुलाई देख्छु मन थाम्न सक्दिन्न । त्यसैले देखेका समस्याहरुलाई कहिले फेसबुकमा लेख्छु त कहिले जनप्रतिनिधि समक्ष राख्छु । कोहि कसैले चासो देखाउदैन र आफै समाधान गर्ने बाटो खोज्छु तर सम्भव देख्छु अनी फेरि मन मारेर बस्छु । अन्य गाउँ ठाँउहरुमा भएको विकासको गति हेर्छु मनमा कयौं प्रश्न उब्जिन्छन्, अनि फेरि सोच्न थाल्छु । हाम्रो गाउँबस्ती सबै क्षेत्रमा किन पछाडि ? हामी कम्जोर भएर वा जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाएर यो म कहिल्यै बुझ्न सकिन्न ।
त्यसैले केही अन्धभक्त पार्टीको पुच्छर बनेका झोले युवाहरुलाई मेरो अनुरोध छ । तपाईहरुले एक पटक सोच्नुहोस् तपाई युवा हो ? युवाहरुले गर्ने काम के हो ? समाज परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ ? एक पटक आफुले आफैलाई नियालेर मुल्याङ्कन गर्नुहोस,् मेरो अनुरोध छ । एउटा कुरा सँधै याद गर्नुहोस् अरुलाई होच्याएर बोल्दैमा, तपाईं कहिले महान बन्न सक्नु हुन्न । राजनीतिको अर्थ बुझ्नुहोस् हुन त मभित्र पनि केहि कम्जोरीहरु होलान् । वास्तवमा हामी समस्या नै समस्याको भुमरीमा छौं । हामीले देश विकासका लागि गर्नुपर्ने काम कार्यहरू प्रशस्त छन् । यहाँ विकासले गति लिन सकेको छैन भने विकास भएको जति विकासमा दीगोपन छैन । हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको खाचो छ । मेरो यो पार्टी, तेरो त्यो पार्टीको भनेर झण्ड बोकेर उफ्रिनु होइन विकास निर्माणको कार्यहरूमा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने समय आएको छ । शिक्षित अर्धशिक्षित तथा अशिक्षित श्रमशक्ति विदेशिएको छ । यहाँ कृषि क्रान्ति गर्नु छ।दिनप्रतिदिन उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको छ । उत्पादकत्व वृद्धिका लागी नवीन प्रविधिको प्रयोग गरि अत्याधुनिक कृषि युग निर्माण गर्नु छ । जलस्रोतको जलसम्पदाको दोस्रो धनि देश भएर पनि हाम्रो धेरैका गाउँघर अन्धकार नै छन् । विभिन्न गाउँ ठाउँहरुमा खानेपानीको अभाव छ।जसलाई उपयोग गरेर बिजुली बत्ति उत्पादन र ठाउँगाउँमा खानेपानीको सुविधा पु¥याउनुछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात जस्ता क्षेत्रमा असीमित समस्याहरु छन् । गाउँघरसम्म सडक बाटो निर्माण गर्नु छ । गाउँघरमा स्कुल बनाउनु छ । रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नु छ ।
देश बनाउने सपना देखाएर हामी जस्ता गरिब निमुखाकै पिठ्युँ चढेर सत्तामा पुगेकाहरु व्यक्तिगत स्वार्थ र अहमलाई महत्व दिएर आपसमै खिचातानी गरेर देशको स्थिति यस्तो छ । देश भताभुङ भएको छ, दृश्य हाम्रो सामु प्रशस्त देखिएको छ । राजनीति समाज सेवा र देशका नागरिकको हक हितको लागि होइन सत्तामा पुगेकाहरुलाई कमाई खाने भाडो बनेको छ । राजनीति एउटा पेशा जस्तो भएको छ । हाम्रो जस्तो विकासउन्मुख मुलुकका गाउँहरु आज सुरक्षीत छैनन् । कोरोना महामारी छ, बस्ने बास र खाने गासको अभाव छ । प्राकृति विपत्तिले त्रासै त्रास नागरिकमा बढेको छ । कतै बाढी पहिरोले बगाएको छ त कतै बस्तीहरु डुबानमा पारेको छ । सरकारलाई आफ्नो सत्ता जोगाउनमा कठिन छ । अब थोरै हाम्रो स्थानीयतहको सरकारका कुरा जोडौ जहाँ बेला विरोध भैरहेको छ । चार वर्ष बित्दा पनि न केही उन्नति प्रगति भएको छ । न विकासले गति लिएको यस्तो कुरा गर्दा कतिपय अन्धभक्तहरुलाई विरोध गरेको जस्तो लाग्छ । त्यसैले राजनिती खिचातानी छोडौं, हामी नेपाली हौं र हाम्रो पार्टी नेपाल हो र हामी समग्र देशकै कार्यकर्ता हौं भन्ने भावना बोकौं अनि मात्र देश बन्छ । हामी युवाहरु राजनीतिककर्मी र राजनीतिक दलको झिनो स्वार्थका कारण आफ्नो पेशा, आचरण र सामाजिक प्रतिष्ठा भुलेर “तपाईं–मपाई, तँ मूला–म ठूला” जस्ता कार्यमा सहभागी हुन थाल्यौ भने सम्झनुस् दिन ढल्कने निश्चित छ । राजनीतिक चेतना अनिवार्य तथा अपरिहार्य छ तर पेशाकै रुपमा राजनीति, राजनीतिककर्मीले अंगालेको राम्रो मानिन्छ । हामीले हाम्रो कामलाई ईमान्दारीताका साथ निर्वाह गरौं देश तब बन्छ । त्यसैले पार्टीको अन्धभक्त भई मेरो यो पार्टी ,तेरो त्यो पार्टी भन्ने भावना मन देखिनै हटाउ र देश प्रेमी बनौं । सकारात्मक विचार धारा बोकेर काम गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन गरौं नकारात्मक विचार धारा बोकेका सामाजिक हित विपरितका कार्य गर्नहरुको विरोध गरौं ।
माओवादी केन्द्रका जिल्ला कमिटी सदस्य गणेश विक र एमालेका गाउँ कमिटी मनबहादुर पुनकाे निधन
अखिल नेपाल शिक्षक संगठन थबाङ गाउँ कार्य समिति रोल्पा थबाङ गाउँपालिका शिक्षा शाखालाई ज्ञापन पत्र
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७८ पुष ९, शुक्रबार ०८:१८ गते
अखिल नेपाल शिक्षक संगठन थबाङ गाउँ कार्य समिति रोल्पा थबाङ गाउँपालिका शिक्षा शाखालाई ज्ञापन पत्र रेशम बि.क.९ पौष, लिबाङ–रोल्पा ।नेत्र विक्रम...